Kulankii Golaha Shacabka oo baaqday | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Kulankii Golaha Shacabka oo baaqday
Muqdisho(SONNA) Kulanka Golaha Shacabka JFS oo maanta la filayey in uu ka dhaco xarunta Golaha Shacabka ayaa lagu soo waramayaa in uu baaqday.
Kulanka ayaa lasoo sheegayaa in maanta uu u baaqday kooram la’aan, maadaama xubnaha golaha shacabka maalmihii ugu dambeeyey ay kujireen fasax, iyada oo fasaxoodana uu kusoo beegmay munaasabadaha maalmaha Ciidda.
Wariyaheena Ibraahim Guudle Isxaaq oo xarunta Golaha Shacabka ku sugan ayaa kusoo waramaya in kulanka uu u baaqday Kooram la’aan, sidaasi daraadeedna maanta uusan jirin wax kulan ah oo ay yeesheen xubnaha Golaha Shacabka.
Xildhibaanka ayaa Haddii kooramka kalfadhiga Golaha Shacabka uu soo dhameystirmi lahaa waxa ay maanta ka hadli lahaayeen go’aanka ay xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay arinta C/kariin Qalbi dhagax oo kamid ahaa saraakiisha Jabhadda ONLF.
Previous articleIsbadal laga dareemayo wax soo saarka dalagyada beeraha
Next articleMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada Johannesburg